ဦးအောင်ရွှေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အနေဖြင့် လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များကို အသင်းအဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်နိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဦးအောင်ရွှေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အနေဖြင့် လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များကို အသင်းအဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်
ဦးအောင်ရွှေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အနေဖြင့် လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များကို အသင်းအဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်
Posted by ကိုကိုလူဆိုး on Jul 7, 2011 in Myanma News, News | 10 comments
ဦးအောင်ရွှေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အနေဖြင့် လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များကို အသင်းအဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်ပါက လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်းနှင့် လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမည် ဆိုပါက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဇွန် ၂၈ တွင် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ ပြောကြားလိုက်သည်။
၎င်းအပြင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပန်သည့် ကြေညာချက် အမှတ် (၉၇/၂၀၁၀)အရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) နှင့် အခြားပါတီလေးခုကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့် ပြုခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်၍ ပါတီဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ကြေညာခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း ဤကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် လိုက်နာမှုမရှိဘဲ ဌာနချုပ်ရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ ပြည်နယ်ရုံးများ ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်း၊ အချို့ရုံးများတွင် ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူထားခြင်း၊ အလံများ လွှင့်ထူထားခြင်းတို့ အပြင် နိုင်ငံရေးပါတီ အနေဖြင့် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ စာအုပ်စာစောင်များနှင့် ဗီဒီယိုခွေများ ထုတ်ဝေခြင်း၊ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ အစည်းအဝေးများနှင့် အခမ်းအနားများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ရပ်များသည် ဥပဒေအား တမင် ဆန့်ကျင်ဖောက်ဖျက်နေမှုများ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက် နိုင်ရန် ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး၏ တခဲနက် ထောက်ခံ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ထားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်နှင့် ၎င်းမှ ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခဲ့သော နိုင်ငံတော် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေသည့် သဘောလည်း သက်ရောက်နေပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အတွက်လည်း အခက်အခဲများ ပိုမို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရကို အမှန်တကယ် မြတ်နိုးစွာ လက်ခံ ကျင့်သုံးလိုပါလျှင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကို ထိခိုက် ပျက်ပြားစေနိုင်မည့် ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ၊ ပြည်သူနှင့် ဝန်ထမ်းများအကြား စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ထိခိုက် ပျက်ပြားစေနိုင်မည့် အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန် အကြောင်းကြားပါကြောင်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက အကြောင်းကြား ပြောကြားသည်။
ပရဟိတ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေကြသော ရဟန်းသံဃာတော်များလည်း လူဝတ်လဲရမည်ကြောင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ မကြာခင်ထွက်ရန်ရှိ…..
ပရိဟတ လုပ်ငန်းတွေဘက်မှာ ဦးကျော်သူကို တော်တော်လေး လေးစားမိပါတယ် အပြင်မှာ ဦးကျော်သူကိုခေါ်တဲ့နာမည်က သုဘရာဇာမင်းသားတဲ့ နာမည်သာဆိုးတာပါ နောင်ဘ၀ နောက်ဘ၀ ဘ၀ကူးအင်မတန်ကောင်းမှာ.. ဘယ်သူမှ မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မျိုးကို နာမည်ကျော်မင်းသားတစ်ယောက် လုပ်နေတာ နိုင်ငံတကာက လက်ခံတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခု အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ရပ်တိုင်နိုင်ပါစေ…
ဘာမလုပ်ရ ညာမလုပ်ရနဲ. ကျွန်တော်တို.အစိုးရက
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့.. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့… အနိုင်ရပါတီကြီးဟာ.. နောက်၎နှစ်ကြာရင် ကျင်းပဦးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိ(လာ)ဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
ဆိုတော့… ၂ဖက်လုံးက…(ဆုံးဖြတ်ချက်ကျနိုင်မဲ့) အချိန်စောင့်နေတယ်ထင်ပါကြောင်း…။
“ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး၏ တခဲနက် ထောက်ခံ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ထားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်နှင့် ၎င်းမှ ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခဲ့သော နိုင်ငံတော် အစိုးရကို ”
ကျုပ်လည်း မဲ မပေးမိပါဘူး….
ကျုပ်သူငယ်ချင်းတွေလည်း မဲ မပေးမိပါဘူး..
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု က ဘာဖြစ်သွားတာတုန်း..
ဒေါ်စုကလည်း… ပါတီ တစ်ခုခုထဲ မ၀င်ခင်တော့…. သူတို့ပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်..
သဂျီး ပြောတဲ့ အတိုင်း နောက် လေးနှစ် ကြာရင်. ကျင်းပဦးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရှိမှာပါ…
နဂိုကတည်း က ပါတီ တစ်ခု အနေနဲ့ ရပ်တည်ချင်ရင်…. ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ရမှာလေ…
အခုမှတော့ လူမှုရေးလုပ်ငန်း လုပ်မယ်ဆိုလည်း မှတ်ပုံတင်တော့ပေါ့…
ခက်တာက မြန်မာ ပြည်သူများကလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ခင်တော့ တရားမင်တာတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်..
ပြည်သူ အားကိုးခဲ့တဲ့…လက်ရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုကလည်း ပြည်သူကို ဘယ်လောက် ကိုယ်စားပြုနိုင်မလဲ စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်..
NLD တုန်းကတော့… ပြည်သူ့မျက်နှာ ကြည့်သလိုနဲ့….
ဒိုင်ညစ်တိုင်း ပြိုင်ပွဲ မှာ ဆက်မကစားတော့ဘူးဆိုရင်…. ဘောလုံးအသင်းတွေ ဘယ်လို ကစားတော့မလဲ…
ဆက်ကစား ဖို့က တော့ မိမိတာဝန်လို့သာ မြင်ပါတယ်..
ထင်ထားတဲ့ NLD ၀င်မပြိုင်ခဲ့တာဟာ…. တစ်ဘက်သားကို အသာပေးသလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..
ထပ်အညစ်ခံရမှာ ကို စိုးရိမ်တိုင်း…. တစ်ခါ အညစ်ခံခဲ့ရတာကို ပြန်တွေးတိုင်း.. နာကျည်းတတ်မယ်ဆို..
ဘယ်တော့မှ နိုင်ငံရေးပါတီ အမည်မခံတာ သာပြီး ကောင်းပါတယ်….
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီ ကလည်း
အခုတော့ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ မသိ..
တစ်သီး ပုဂ္ဂလတွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်ကုန်ရတာတုန်း…
်မင်းတို့ဘာတွေပြောပြော ဒေါ်စုနဲ့အန်အယ်ဒီကတော့ ပန်းပန်လျက်ပဲ။ ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ်၊ ခြင်္သေ့မှန်ရင် မြက်မစား ဘူးကွ။ မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ ဝက်တွေ မစင်ကို ကိုယ်မှာသုတ်ပြီး အရောင်တလက်လက်ထွက်နေတဲ့ ပတ္တမြားဂူနံရံကို ပွတ်တိုက်ပေကျံအောင် လုပ်လည်း တောက်ပြောင်မြဲပဲ။ ဘေးထိုင်ဘိုင်ကျ ဘုတောဘူစော်နံတာ တော်ပါတော့ကွာ..ခွေးလေးခုန်လို့ ဖုံမထပေမယ့် မျက်စိနောက်တယ်..
အများ အတွက် အလုပ်လုပ်မယ် ဆိုရင်…
ချစ်ခြင်း… မုန်းခြင်း တွေ ကင်းအောင်နေတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်….
အဖြစ်မှန်ကို အဖြစ်မှန် မှန်းမသိ…
မိမိ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ သုံးသပ်နေကြတော့ကာ…
ခင်ဗျားတို့ ထင်ချင်ရာထင်ကြ….လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကြ….
ဒါတမင် ချောက်ကျအောင်လုပ်တာပါ။ လူတိုင်းနိုင်ငံရေးလုပ်နေကြတာပါဘဲ။ ဗိုလ်ချုပ် (အောင်ဆန်း) စကားရှိတယ်လေ။ NLD ကိုသေးသိမ်အောင်လုပ်တဲ့ အကွက်ပါဘဲ။
လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ တကယ်စေတနာမှန်ပြချင်ရင် လုပ်စရာတွေ အများကြီးပါ။ အရင်က လေသံမျိုးတွေ ဆက်မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဒီနေ့အထိမြင်ကြားရသမျှတွေ ကတော့ လမ်းဟောင်းကိုလိုက်နေတုံးဘဲလေ….
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်က ထိုက်သင့်သလောက် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေ တခဲနက်ထောက်ခံတဲ့ NLD ကို မကြည့်ချင် မမြင်ချင်လို့ ဖြစ်မှာပါ…။ ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ NLD ကို သမိုင်းထဲကနေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲကနေ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ပြီး သမိုင်းအသစ်ဖန်တီးရမှာမို့လို့
NLD ဖျက်သိမ်းရေး၊ နိုင်ငံရေးလောကက ဖယ်ထုတ်ရေးဟာ သူတို့အတွက် အဓိကတာဝန်ပါ…။